नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : किन चाहियो यति धेरै राजारानी ??
किन चाहियो यति धेरै राजारानी ??
जहाँ जनतासँग जनताजस्तो व्यवहार गरिदैन, जनतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास, कपासको कुनै बन्दोबस्त हुन्न, त्यो देशमा किन यति धेरै राजारानीहरु चाहियो ?
लोक भोकै छन्, लोकले कसैको खल्को हालेका पनि होइनन्, कसैको बरखी बसेका पनि छैनन् । छाक छाडेका छन् किनकि खाने केही छैन। लोकतन्त्र छ, लोक लोकजस्ता छैनन्, लोकमाथि राज्यले बिभेद गरेको छ, लोकलाई दासभन्दा तल्लो स्तरमा मर्न बाध्य पारेको छ राज्यले ।
जहाँ जनतासँग जनताजस्तो व्यवहार गरिदैन, जनतालाई मरे मरुन् भन्छ राज्यले, जनतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास, कपासको कुनै बन्दोबस्त हुन्न, त्यो देशमा किन यस्ता राजाहरु चाहियो, किन यस्ता रानीहरु चाहियो ?
७७ जिल्ला, ७ प्रदेशमा राजारानीहरु छन्। ७६१ सरकार छन्, सबै सरकारमा राजारानीहरु बिराजमान छन् । तिनका आसेपासे साना राजारानी त कति छन् कति !
कतिले चुनाव हारेका छन्, तिनलाई पनि राजारानी बन्नु छ । कति चुनाव जितेर पनि राजारानी बन्न पाएका छैनन्, तिनलाई पनि राजारानी बन्नुछ। सत्तारुढ दलका सप्पै कार्यकर्ता राजारानी । कोही टोले राजारानी, कोही झोले राजारानी । कोही सिंहदरवारका, कोही शितल निवासका राजारानी । गणतन्त्र नेपाल भनेको त राजारानीहरुको घरवार, दरवार पो बन्यो ।
अहिले त ३० अर्वभन्दा बढी खर्च गरेर ल्याएको संविधानले पनि धान्न छाड्यो। छ्यासछ्यास्ती राजा, कति रानी । टोलदेखि सिंहदरवार, शितल निवास, गाउँ-नगर-राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा जताततै राजैराजा, रानी रानी । तिनका परिवार, पार्टर्ीीरिवार, यिनलाई पाल्न मात्रै अर्वबाट खर्बको खर्च लाग्ने भइसक्यो ।
०५८ साल अघि दरवारलाई ८ करोड वाषिर्क बजेट दिइन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा ५८ करोड चाहिन्छ भनेर छुट्याइदिए । अहिले त ३० अर्वभन्दा बढी खर्च गरेर ल्याएको संविधानले पनि धान्न छाड्यो । छ्यासछ्यास्ती राजा, कति रानी । टोलदेखि सिंहदरवार, शितल निवास, गाउँ-नगर-राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा जताततै राजैराजा, रानी रानी । तिनका परिवार, पार्टर्ीीरिवार, यिनलाई पाल्न मात्रै अर्वबाट खर्बको खर्च लाग्ने भइसक्यो ।
स्वयंसेवीले कहिले भात बाँड्लान र खाउँला भनेर देशका चउर चउरमा गरीवहरु लाइन लागिरहेका देखिन्छन् । एउटा पीसीआर गर्न अघिल्लोदिनदेखिनै सडकमा सुतेर लाइन लाग्नेहरु भेटिन्छन् । चउरमा बाँडेको भात खान पाइन्छ कि भनेर आश गरेर बस्नेहरु सबै यी राजारानीकाजस्तै हाड-मासुले बनेका मान्छे हुन् । यी नागरिक कम, दास बढी लाग्छन् । तर विभेद कति ठूलो छ। एकथरि प्रभावशालीहरु लुटिरहेका छन्, काजु खाएर र्‍याल काढिरहेका छन्, अर्काथरि धेरै दीनहीनहरु बाँडेको भात पर्खिरहेका छन् । दुःखीहरु, गरीवहरु अस्पतालमा उपचार पाइरहेका छैनन् । नाना, खाना, छाना, शिक्षा, कता हो कता- कोही पहिरोले थिचिएका छन्, कोही बाढीले बगाएका छन्, बाँचेका देश विदेशमा भोकले रोइरहेका छन् ।
रोएर बाँच्ने निरीह, बेसहाराको लागि सरकार हुनुपर्ने हो, न्यायालय हुनुपर्ने हो, सरकार कहाँ छ - न्यायालय कहाँ छ -
सुकिलो मुकिलो सरकार, न्यायालय, नेता, प्रशासकहरु नाङ्गै छन् जस्तो लाग्छ। यति अस्लिलहरु संविधानका रक्षक, लोकतन्त्रका सञ्चालक, मानवाधिकारका संरक्षक हुँदा रहेछन्- नेपालमा यो सब देखियो ।
सुकिलो मुकिलो सरकार, न्यायालय, नेता, प्रशासकहरु नाङ्गै छन् जस्तो लाग्छ । यति अस्लिलहरु संविधानका रक्षक, लोकतन्त्रका सञ्चालक, मानवाधिकारका संरक्षक हुँदा रहेछन् - नेपालमा यो सब देखियो ।
यिनलाई न यो लोकको चिन्ता छ, न परलोकको डर छ। आमलोक यिनीहरुप्रति दया गरिरहेका छन्, घृणा गरिरहेका छन् । यिनीहरु कसैलाई लज्जाबोध छैन । लज्जा त्यागेपछि केही बाँकी रहन्न भनेको यही रहेछ ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सोध्छन्- पहिलोपल्ट राज्यको ढुकुटी घाटामा गयो। कहाँ गयो त्यो धन - सदुपयोग भएको भए कहाँ भयो - म नागरिक हुँ प्रश्न गर्न हक छ मलाई- आफ्नो सुख सुविधा, खानपान केही पनि कटौति गर्न टसमस गर्न नहुने - लोक मरिरहेका छन्, यिनमा अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहेन ।
बच्चा च्यापेकी महिलाहरु पेटभरि भात खान पाए हुन्थ्यो भनेर पिलपिलाइरहेका देखिन्छन् । व्यापारी छटपटाएका छन्, उद्यमी असिन पसिन भएका छन्, हरेक दिन २० जनाभन्दा बढी आत्महत्या गर्छन् भनेर सरकारको प्रहरी भन्छ । कहाँ छ लोकसरकार - यस्तो पनि समाजवाद हुन्छ- र्सवहारावाद हुन्छ -
ठूलासाना पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार आइरहेका छन्- सुत्केरीले पेटभरि भात खान नपाएर आत्महत्या गरिन् । बच्चा च्यापेकी महिलाहरु पेटभरि भात खान पाए हुन्थ्यो भनेर पिलपिलाइरहेका देखिन्छन् । व्यापारी छटपटाएका छन्, उद्यमी असिन पसिन भएका छन्, हरेक दिन २० जनाभन्दा बढी आत्महत्या गर्छन् भनेर सरकारको प्रहरी भन्छ । कहाँ छ लोकसरकार - यस्तो पनि समाजवाद हुन्छ- र्सवहारावाद हुन्छ -
बाढीपहिरो, कोरोना महामारीले समाज थिलथिलो बनेको छ। मान्छेमात्र होइन, मान्छेभित्रको मानवता मरिरहेको छ । तर सरकार, संसद सबै व्यक्ति स्वार्थ, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । को मर्ने, को बाँच्ने भन्ने जोखिममा आइसक्दा पनि गरीव मुलुकका राजारानीहरु आफ्नै सुखसयलमा चिन्तित छन्, भोकभोकै परेका लोकको चिन्तामा छैनन् । सभ्य समाज, लोककल्याणकारी सरकारका लागि योभन्दा ठूलो कलंक अरु के हुनसक्छ -
अतिमात्र होइन, अतिसार भयो । यसकारण मुलुकले विकल्प खोज्नर्ुपर्छ अव ।
देश महाअप्ठेरोमा छ, देशवासी महाकष्टमा छन् । ख्याल गर्नुपर्ने जिम्मेवार जो छन्, ती सत्ता, सम्पत्ति र स्वार्थको बन्दी बनेका छन् । जति पनि दलहरु छन्, सत्ताप्रतिपक्षीहरु छन्, सबै आन्तरिक गोलचक्करको बिबादमा फसेका छन् । र्सपल र्सपको खुट्टा देख्छ भनेझैं, एकदोस्राप्रति आरोप प्रत्यारोप र अविश्वासका झटारा हान्नमै व्यस्त देखिन्छन् ।
देशको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री भन्छन्- सबैले सुती सुती खान पाउँछन्, कसैले हातमुख जोर्नका लागि मुस्किल पर्नेछैन । प्रधानमन्त्रीको यस कथनको कुनै जनतालाई रत्तीभर पनि विश्वास छैन । किनकि जनता रोगले, अन्याय र भोकले मरिरहेका छन् ।
कोरोना महामारी समाजमा फैलिसक्यो । झण्डै साँढे ५ सय जनताको ज्यान हरण गरिसक्यो। समुद्रतटमा आएको सुनामीजस्तो भइसक्यो नेपालमा कोरोनाको महामारी । कोरोना गाउँदेखि राजधानीलाई सुरसाको मुख बायर निल्न खोज्दैछ । यस्तो अवस्थामा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षीहरु राज्यसञ्जालमा भागबण्डा र राज्यस्रोतमा भागशान्ति भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त देखिनु लोकतन्त्र देशकै लागि दर्ुभाग्य बनिरहेको छ ।
सरकार कुम्भकर्र्णो निन्द्रामा निदाउन सक्दैन । न प्रतिपक्ष सरकारको र्समर्थक भएर चुपचाप बस्न सक्छ। ससाना लोभमा फसेर सरकार र प्रतिपक्षीहरुमात्र होइन, देशका विद्वानहरुसमेत मौन रहेका छन् । देशमा डढेलो लागेपछि कोही बच्दैन, आगोको कोही नातेदार वा कार्यकर्ता हुनसक्दैन भन्ने सत्य र मानवधर्म मरेर गइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अन्धेरनगरीको अवस्थालाई चिर्न चिच्याउनु पर्ने दायित्व नागरिक समाजको पनि हो। नागरिक समाज पनि पार्टर्ीीार्टर्ीी बाँडिएर मौनता साधिरहेका छन् । यो मौनता कति महगो छ, कति अमानवीय साबित भइरहेको छ, कसले बताइदिने - अवस्था जवाफदेहीबिहीनता, गतिहीनता, दायित्वबिहीनताको डरलाग्दो संकेत पनि हो । देश भासिने दल दल पनि हो । हरेक नेता गुटबाजी गरिरहेका छन्, यसकारण नेताहरु न पार्टर्ीीद्धान्तका रहे, यिनमा न देशभक्ति नै कायम रहृयो । राजनीति नाङ्गले पसलेमा सिमित हुनपुगेको छ ।
नित्सेले लेखेका थिए- मर्‍योर् इश्वर । यसो भन्ने नित्से एकदिन मरेर्।र् इश्वर मर्‍यो कि मरेन- प्रश्न आज पनि प्रश्न नै छ ।
रोग, भोक र शोकमा मर्दै गएका लोकका लागि लोकतन्त्र यस्तै अहं प्रश्न हो। लोकतन्त्र त नमर्ला तर मरेतुल्य शासकहरु यसैगरी मर्दै रहनेछन् । लोकले बिद्रोह गरेन, बिकल्प खोजेन भने लोक अन्याय गिलोटिनमा यसैगरी मरिरहनेछन् ।
यही संविधानले अपराध बढाएको छ, हत्याहिंसा चर्काएको छ, चोरीडकैती रोक्नसकेन, चुनाव हारेका र आफन्तलाई राज्यदोहन गर्ने पदमा बिराजमान गराएको छ । यो संविधान जे खायो पचायो गर्ने पाचकजस्तो लाग्छ । यस्तो पद्धति लोकका लागि गाईजात्रा हो । लोक हरेक दिन ठूला पार्टर्ीीको गाईजात्रा हरेर दाँत किटिरहेका छन् ।
किनकि थारो भैँसी बाघले खाए कि किलो रित्तै भए के- बुढो भैंसी लडेर मरोस् कि थला परेर मरोस् । संविधान भन्ने पुस्तक रत्नपार्कमा चटक देखाएर बेचिने टाउको दुखेको, नाइटो दुखेको, गानागोला, पुरानो रोग निको पार्ने काठको धुलो पोको पारेको र्सवाैषधिजस्तो हुनपुगेको छ । यही संविधानले अपराध बढाएको छ, हत्याहिंसा चर्काएको छ, चोरीडकैती रोक्नसकेन, चुनाव हारेका र आफन्तलाई राज्यदोहन गर्ने पदमा बिराजमान गराएको छ । यो संविधान जे खायो पचायो गर्ने पाचकजस्तो लाग्छ। यस्तो पद्धति लोकका लागि गाईजात्रा हो। लोक हरेक दिन ठूला पार्टर्ीीको गाईजात्रा हरेर दाँत किटिरहेका छन् ।
यसकारण जनताले बिकल्प खोज्छन्, खोज्नर्ैपर्छ । पशुजातको बिरालालाई पनि ढोका थुनेर कुट्यो भने बाँच्नका लागि झम्टिन्छ । लोक त मान्छे हो, र्सार्वभौम छ। लोक सहनसक्छ, सहनुको सीमा नाघेपछि पक्कै सडकमा निस्कन्छ। मुख थुनेर लोकलाई कतिञ्जेल राख्ने, जब लोकले ओठ टोकेर बोल्छ, बोलेपछि यस्तो निम्छरो नेतृत्व पुच्छर ठाडो पारेर भाग्छ ।
लोक अब बोल्छ, लोकले अब बिकल्प खोज्छ ।
नाकावन्दीकालमा राष्ट्रवादमा उभिएकाहरु पछिल्लो समय अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नक्सा र्सार्वजनिक गरे । अहिले आएर त्यो नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तकसमेत र्सार्वजनिक गर्नबाट रोक लगाउन पुगेका छन् । नेपाली भूमि सदा नेपाली भूमि नै हो, यसमा लुकाउनु, छिपाउनु पर्ने के कुरा छ र- तर सरकारले लुकायो, प्रतिपक्षीहरु मौनता साधिरहेका छन् । राष्ट्रियता पनि राजनीतिक हतियार हुन्छ र - यिनले बनाए ।
नाकावन्दीकालमा राष्ट्रवादमा उभिएकाहरु पछिल्लो समय अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नक्सा र्सार्वजनिक गरे । अहिले आएर त्यो नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तकसमेत र्सार्वजनिक गर्नबाट रोक लगाउन पुगेका छन् । नेपाली भूमि सदा नेपाली भूमि नै हो, यसमा लुकाउनु, छिपाउनु पर्ने के कुरा छ र - तर सरकारले लुकायो, प्रतिपक्षीहरु मौनता साधिरहेका छन् । राष्ट्रियता पनि राजनीतिक हतियार हुन्छ र- यिनले बनाए ।
नेपाली राजनीतिबारे एकजना महिलाले लेखेकी थिइन्- यो त धोती उचालेर छाती छोपेजस्तो भयो । यो राजनीतिमा अव बाँकी के रहृयो -र्
जर्ज अरवेलले एनिमल फार्म उपन्यासमा लेखेका थिए- अल एनिमल आर इक्वेल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वेल देन अदर्स। नेपाली राजनीति यो भनाईभन्दा भिन्न देखिन्न ।
लोकले धान, गहुँ रोपेका हुन्, सिस्नोको घारी उम्रियो। न जीवन बाँकी रहृयो, न संर्घष्ा। यस्तो सिस्नोको घारी लोकले छिमोल्छ, छिमोल्छ। यो प्राकृतिक सिद्धान्त पनि हो ।
लोकले धान, गहुँ रोपेका हुन्, सिस्नोको घारी उम्रियो । न जीवन बाँकी रहृयो, न संर्घष्ा । यस्तो सिस्नोको घारी लोकले छिमोल्छ, छिमोल्छ । यो प्राकृतिक सिद्धान्त पनि हो ।
हर्रबर्ट स्पेन्सरले खुब भनेका हुन्- र्सभाभाइभल अफ दी फिटेस्ट ।